"पहाड सैलंडन": गुणहरू, सङ्केत गर्छ, समीक्षा
पुरातन समयका देखि, मानिसले धेरै छाला रोग, आन्तरिक अङ्गहरूको रोगहरु उपचार गर्न सैलंडन प्रयोग गर्न सिकेका छन्। यो जडिबुटी को रस चाँडै warts तपाईं छुटकारा गर्न सक्नुहुन्छ, papillomas, ठोस कर्न्स।
बाक्लो सुन्तला तरल, धेरै तीतो स्वाद - सैलंडन अमृत छ। किन धेरै dermatologists warts र warts हटाउन सैलंडन आधारमा रस वा बाम प्रयोग सिफारिस? यसलाई विरोधी क्यान्सर गुण छ र मानव papilloma भाइरस विरुद्ध लड्न अत्यन्तै प्रभावकारी छ किनभने यो छ। हामीलाई यस लेखमा थप विस्तार जाँच्न यो बोट को विशेषताहरु गरौं।
फाइदा र उपचार सैलंडन को बुरा
लोक चिकित्सा मा सैलंडन धेरै गंभीर छाला रोग निको पार्न सक्नुहुन्छ भनेर विषालु पदार्थ एक प्रकारको रूपमा प्रयोग। साथै, यो क्यान्सर कक्षहरू मार्न प्रयोग गरिन्छ। अक्सर क्यान्सर चिकित्सा विज्ञानियों किन छाला क्यान्सर को उपचार को लागि अमृत को प्रयोग सिफारिस छ। यस्तो प्रयोग बाहिर राम्रो पूरा गर्न एक चिकित्सक संग परामर्श बिना: यस मामला मा, हामी चेतावनी दिन चाहन्छौं।
हामीलाई हटाउने को फाइदा र बेफाइदा के छन् हेरौं warts सैलंडन? ट्यूमर नाश गर्ने एक प्राकृतिक दबाइ - एक कि सैलंडन बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। यो बोट जो तपाईं कुनै सङ्कलन गर्न अनुमति दिन्छ, सामान्यतया उपनगरीय क्षेत्रमा नजिकै बढ्छ जङ्गलहरूमा।
बुरा द्वारा बिरुवाहरु को सीमित समय संग्रह (अगस्ट मई) समावेश गर्नुहोस्। सैलंडन यस अवधिको निको रस निकाल्छ समयमा यो थियो। अन्य समयमा, यो कुनै मूल्य छ।
"पहाड सैलंडन" (बाम)
यसको संरचना मा सैलंडन रस बाहेक यो बाम अन्य औषधीय बिरुवाहरु को अर्क समावेश गर्दछ। यो rhododendron, gentian, Kakalia भाला।
सक्रिय रूपमा पदार्थ chyle जसमा बाह्य प्रयोगको लागि दबाइ ठूलो सैलंडन।
संरचना जस्तै allergodermatoses, मकै, psoriatic सजीले रूपमा विकास (उल्टो) छाला कमजोरीहरू सुधार गर्छ।
"पहाड सैलंडन" फरक मूल को कस्मेटिक कमजोरीहरू हटाउन डिजाइन गरिएको छ। उहाँले नियुक्त गरिएको छ:
छाला क्यान्सर को उपचार मा "पहाड सैलंडन" को प्रयोग को अवस्थामा। यो बोट को रस मा निहित बोट विष, प्रभावकारी क्यान्सर कक्षहरू नष्ट भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
"पहाड सैलंडन": बयान
हेरिएको तयारी एकदम आक्रामक छ, त्यसैले यसलाई जब प्रभावित छाला क्षेत्र लागू स्वस्थ छाला बिगार्न छैन ताकि, पातलो छडी प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
शरीरमा दस मिनेट - - बाह्र मिनेट उपचार समयमा अनुहार र घाँटी ट्यूमर मा।
Papilloma - एउटा जीव मानव papilloma भाइरस को हार मा छाला देखिने सानो growths। तिनीहरूले प्रारम्भिक चरणमा एक स्वास्थ्य जोखिम खडा छैन। बिस्तारै तथापि, तिनीहरूले आकार मा, अक्सर क्यान्सर कक्षहरू तिनीहरूलाई गठन गर्दै एक ठूलो क्षेत्र, कब्जा गर्न बढ्न सक्छ।
"पहाड सैलंडन" (यो प्रतिक्रियाहरू पुष्टि) मात्र ट्यूमर हटाउन सक्नुहुन्छ, तर पनि भाइरस नष्ट गर्न। यसो गर्न, तपाईं बाम को papillomavirus सानो रकम दुई पटक एक दिन दस दिनको लागि चिकनाना पर्छ।
Warts धेरै बाहिरबाट papillomas सदृश छन्। मुख्य फरक - यी ट्यूमर को harmlessness, तिनीहरूले शायद बेचैनी (को पाठ्यक्रम, तिनीहरूले Palms वा औंलाहरु Folds मा छैनन् भने) कारण। यो समस्या बेवास्ता गर्न सक्दैन भने हुन, warts चाँडै शरीर मार्फत फैलाउन सुरु। तिनीहरूले भद्दा छन्, र तिनीहरूले मा ठूलो संख्या अनुहार वा हातमा देखा छन् भने, घृणित हेर्न।
"पहाड सैलंडन" तपाईं ती फोहर कमजोरीहरू देखि दुई को लागि, अधिकतम तीन दिन बचत गर्न सक्षम छ। कुनै आश्चर्य मानिसहरू अक्सर सैलंडन warthogs भनिन्छ। यो उपचार को विशाल फाइदा - बिल्कुल पीडारहित छ।
यसलाई गरिएका रूपमा, हाम्रो compatriots थुप्रै लागि छाला कमजोरीहरू "पहाड सैलंडन" को उपचार मा प्रयोग गरिन्छ। समीक्षा यस warts र papillomas विनाश लागि आदर्श उपकरण हो भन्छन्। को त्वकरोग मा लामो समय को लागि केही महिला एक एकदम गंभीर दुखाइ अनुभव गर्दा, तरल नाइट्रोजन संग warts जलाए। कि पछि, तिनीहरूले "पहाड सैलंडन" प्रयोग गर्न सल्लाह थियो। परिणाम पार आशा - warts कालो गरिएका र पदचिन्हछैन छोडेर खस्यो।
धेरै यो उपकरण को अविश्वसनीय बलियो र धेरै रमाइलो गन्ध भन्छन्। तर, यसको उपचारात्मक प्रभाव दिइएको, यो आवश्यक छैन गम्भीर कमीकमजोरी यो विशेषता छ।
राम्रो परिणाम warts विरुद्ध लड्न "पहाड सैलंडन" देखाउँछ। डाक्टर को अनिवार्य परामर्श र जब लागू बाम शुद्धता - यो एजेन्ट को प्रभाव अनुभव गरेका छन्, जसले मान्छे देखि मात्र सल्लाह।
Codelac फाइटो के हो?
शैम्पू "Etriveks": प्रयोगको लागि निर्देशन, सङ्केत गर्छ
औषधि "Korizaliya": दबाइ को समीक्षा
दबाइ 'Torvakard'। प्रयोगको लागि निर्देशन
Lecho मरिच र टमाटर र गाजर: व्यञ्जनहरु
भौगोलिक जानकारी स्रोतहरू। भूगोल साहित्य को सूची। नक्सा, atlases
स्कटल्याण्ड प्रतीक - एक थीस्ल, bagpipes र चारखाना
बाल विकास लागि खाडी आवश्यक तेल। खाडी तेल - समीक्षा
कब लामो कुकुर कुकुरमा रुचि छ? हामी जवाफ दिन्छौं ...
काठ र के को लागि मिलिंग मिसिन कसरी लागू गरिन्छ गर्छ?
मार्केटिङ योजना - तपाईंको व्यापार को लागि जग।
जिन्स मोडेल: सिंहावलोकन, वर्णन, सुविधा र समीक्षा